Macallinka shaqada Kooxda Manchester City ka bedelaya Tababare Pep Guardiola oo la sii ogaaday – Gool FM
Haaruun February 16, 2020
(Manchester) 16 Feb 2019. Waxaa shaaca laga qaaday magaca macallinka shaqada Kooxda Manchester City ka bedelaya Tababare Pep Guardiola haddii uu naadiga reer England ka tagayo.
Sida wararku ay sheegayaan Tababarihii hore ee Kooxda Tottenham, Mauricio Pochettino ayaa la sheegayaa inuu u dhaqaaqi doono garoonka Etihad si uu shaqada kooxda Man City uga bedelo macallin Pep Guardiola.
Jariiradda The Express ayaa warinaysa in macallin Mauricio Pochettino uu tababare Pep Guardiola ka bedeli doono shaqada, isla markaana uu hoggaanka u qaban doono Manchester City xilli ciyaareedka soo socda.
Tababaraha haatan ee Man City, Pep Guardiola ayaa la filayaa inuu tago oo uu u dhaqaaqo dhinaca Juventus isagoo ka war haya ganaaxa tartammada Yurub laga saaray Kooxda reer England.
Taasi waxa ay albaabada u furtay in kooxda ka arrimisa garoonka Etihad ay wadahadallo la furato tababarihii hore ee Tottenham Mauricio Pochettino si uu hoggaanka ugu qabto Naadiga.